Uyikhawulezisa njani into yokukhuphela ubunzima -iGeofumadas
Ikhaya/Internet kunye neBlogs/Indlela yokukhawulezisa ukulandwa okukhulu
Indlela yokukhawulezisa ukulandwa okukhulu
Zininzi iinkqubo zokuphatha ukukhuphela okukhulu, njengokukhuphela iifayile ezinkulu.
Ukukhetha enye, into yokuqala kukusebenzisa Firefox, kusebenza ngakumbi ukufumana iAddons ehambelana nohlobo olufakelweyo ... kwaye nangona inani elifanelekileyo labaphikisi abaguqukayo litshintsha, ndicinga ukuba ekugqibeleni Umhloli uya kufa. Iinguqulelo ezithile zeFirefox zize ngaphandle kokhetho lokukhetha ifolda apho uza kugcina ukhuphelo, andazi ukuba kutheni.
Kule nto ufuna kuphela ukuya kwi "zixhobo / izongezo / ukufumana izandiso / ulawulo lokukhuphela".
Ewe, kufanele ukuba zininzi, kodwa ndiyifumene le kwaye ibonakala ilungile kum: ikhona Behla bonke!
Emva kokuyifaka (iya kukucela ukuba uqale kabusha iFirefox), xa uvelisa ukhuphelo, inketho yokuyikhuphela yongezwa kwipaneli usebenzisa iphaneli yokulawula Behla bonke, kunye nefowuni yolawulo.
Iphaneli ibonakala isebenza kakhulu, unokukhetha ukhetho lokukhuphela okanye ukumisa kancinci. Kwimeko apho ufuna ukukhuphela iifayile ezininzi, ungashiya ukulanda ebusuku, usebenzise i-bandwidth ngexesha apho ii-geofumados zihlala khona ubusuku bonke.
Kuyacetyiswa ukuba wenze ukhetho lokuba kwenziwe ukhuphelo olunye kuphela ngexesha, oku kwenziwa kwikona esezantsi ngasekunene, "ukhetho / oluphambili", apho kulungiselelwe ukuba ifayile enye ngexesha elinye inokukhutshelwa.
Emva koku, bavula zonke ukhuphelo (phinda uqalise), ukuze xa enye igqityiwe, enye iya kuqhubeka ... ngokuqinisekisa ukusebenza ngcono kwenethiwekhi kunye nesibuko sokukhuphela.
Landa i-AutoCAD 2009 mahala
I-Kanbanflow-sisicelo esihle sokulawula imisebenzi esalindelwe
Amanyathelo okulandelela ifowuni
Ndizabalazela ukukhuphela inkqubo
kwaye ndifuna ngokwenene
ndixelele ukuba ndiyakwenza njani
iyona sixhobo esihle kakhulu sokusebenza kweso sikhombi
Inkqubo enamandla ngoko ndifuna ukuzihlaziya ngokwalo sixhobo
Thenga iNintendo DS Lite eSpain